LHRH-A3 noho ny tsindrona Bovines & kisoa - China Ningbo Faharoa hormonina
Luteinizing hormonina hormonina A3 noho ny tsindrona (LHRH-A3) (Trade Name: Zaizaiduo) Io no hany Corporation rehefa lasa GMP mpanamboatra taratasy fanamarinana ao an-trano eo amin'ny lafiny ny akora ho an'ny Luteinizing hormonina Fanafahana hormonina A3. [Description] entana ity dia fotsy maina Hivaingana-biriky na ny vovoka. [Andrakitra sy ny fampiasana] Polypeptide hormonina zava-mahadomelina. Mety hampiroborobo ny biby Précédent pituitary mba hanafina luteinizing hormonina (LH) sy ny follicle-mandrisika hormonina (FSH), izay ny maturi ...
L uteinizing H ormone R eleasing H ormone A 3 ny tsindrona (LHRH-A 3 )
Ity Corporation no hany mpanamboatra rehefa lasa GMP taratasy fanamarinana ao an-trano in terms of the raw materials for Luteinizing H ormone R eleasing H ormone s A 3.
Polypeptide hormonina levitra. Mety hampiroborobo ny biby Précédent pituitary mba hanafina luteinizing hormonina (LH) sy ny follicle-mandrisika hormonina (FSH), izay ny fahamatorana ny ovarian follicles dia nampirisika ny ovulate. Tsy azo avela fotsiny ny hormonina avy hatrany hanafaka voafintina amin'ny pituitary fihary, fa hanentana sy voafintina, ny hormonina. Mety hampiroborobo ny biby spermatogenesis ho an'ny lehilahy.
Efa mahazatra ampiasaina:
1. Manatsara ny fako habe;
2. Manatsara ny tahan'ny vohoka mandritra estrum;
3. hitondra ny mahantra matotra ny follicles, nahemotra ny famokarana atodinaina, ary follicular kista;
4. Manamafy ny vokatry ny Super-ny famokarana atodinaina,;
5. Manamafy ny asa ny Corpus luteum.
I. Fampiharana dia omby aman'ondry fandikana
1. Mampiroborobo ny famerenana amin'ny laoniny ny ovarian asa sy shortening ny calving elanelam-potoana io: intramuscular fampidirana 5-15μg ao anatin'ny andro aorian'ny fanaterana 8-18; indray mandeha isan'andro mandritra ny 3 andro misesy.
2. Hatsarao bevohoka ny tahan'ny: a. intramuscular fampidirana 25μg nandritra ny manao firaisana be dia afaka manatsara ny tahan'ny fitondrana vohoka eo amin'ny estrum; b. intramuscular fampidirana 25μg tokony ho 40 andro taorian'ny delivery, intramuscular fampidirana 0.2mg ny PG miaraka amin'ny elanelam-potoana io ny 6 andro, ary intramuscular fampidirana 20μg amin'ny elanelam-potoana iray hafa andro mazava ho azy fa afaka manatsara ny tahan'ny vohoka ao anatin'ny 60 andro aorian'ny fiterahana.
3. Treatment ny follicular maldevelopment mitaredretra ny famokarana atodinaina,: intramuscular fampidirana 25-30μg nandritra ny manao firaisana na 2 ora alohan'ny manao firaisana.
4. Fitsaboana ny multi-follicle fampandrosoana: intramuscular fampidirana 25μg isan'andro mandritra ny 3 andro misesy.
5. Fitsaboana ny ovarian kista: intramuscular fampidirana 25μg isan'andro nandritra ny 5 andro misesy sy intramuscular fampidirana ny progesterone 100mg Mandritra izany fotoana izany; mba hisorohana ny fiverenan'ilay, progesterone dia nampidirany ny fotoana maro telo volana aorian'ny vohoka.
II. Fampiharana in Porcine fandikana
1. Hatsarao ny tahan'ny vohoka sy ny fako haben'ny mamafy amin'ny estrum: intramuscular fampidirana 25-50μg 0-4 ora alohan'ny manao firaisana rehefa mitranga ny mamafy estrus dia afaka mampitombo ny fako eo ho eo ny haben'ny mamafy amin'ny mihoatra ny 2 loha.
2. Low haniry hanao firaisana amin'ny lehilahy kisoa: 25μg isan'andro ho an'ny 3-5 andro misesy.
III. Fampiharana in Ondry fandikana
Taorian'ny ondrivavy kendrena ara-dalàna nanomboka estrus, intramuscular fampidirana entana 5-10μg ity dia natao avy hatrany, ary manao firaisana dia ampiharina 4-6 ora taty aoriana (raha toa ny ondrivavy Tsy any estrus, 0.5-1ml ny Andriamanitra telo izay iray-hormonina dia afaka ny ho ampiasaina isaky ny ondrivavy mba hampiroboroboana ny estrus). Raha ny fampianarana dia nanaraka, ny twinning tahan'ny ho an'ny osy dia nitombo be, ary ny haben'ny fako ho an'ny ondry dia ho bebe kokoa.
IV. Fampiharana eo amin'ny biby fiompy hafa
Fampiharana intramuscular fanafody nandritra ny ora maromaro manao firaisana, na manao firaisana alohan'ny hanatsara ny tahan'ny fitondrana vohoka sy ny fako size: 15μg isaky ny serfa; 3-5μg isaky ny bitro; 15μg isaky ny alika na ny amboahaolo izany; 5μg isan-biby ho an'ny hoditra.
10 × 10 × 15μg 25μg 10 × 10 × 100μg 50μg
Previous: LHRH-A2 for tsindrona Bovines & kisoa
Manaraka: Oxytocin tsindrona (Pitocin)
Lhrh-A3 Fa tsindrona Bovines & kisoa
Cloprostenol Sodium tsindrona (PG)